Ukhuphiswano - Iindaba ze-iPhone | IPhone iindaba
Kwi-iPhone eyiyo siyakuthanda ukulandela ngokusondeleyo iintshukumo ezithi ziphawulwe kukhuphiswano Ukusuka kwiApple. Ngokwandayo, i-iOS kufuneka ijongane neetheminali eziphezulu eziphakamileyo ekunikezeleni ngeentlobo ngeentlobo zeempawu kunye nenye indlela yokusebenza, ngakumbi ukuqaqambisa indima I-Android, ifowuni yeWindows okanye iBlackBerry OS phakathi kwabanye. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi ezona ntshaba zichanekileyo ze-iPhone, apha unokufumana ukuba ziyintoni na Ezona smartphones zinamandla kwintengiso.
I-Samsung iye yaba ngumvelisi omkhulu we-smartphone emhlabeni iminyaka emininzi. Nangona kunjalo, ngokweenkampani zaseTshayina ...
por UIgnacio Sala yenzayo Iiveki ze3 .
Isamsung ihlekisa iApple ngokunikezela ngelaphu layo lokucoca
por UJordi Gimenez yenzayo Iiveki ze3 .
I-Samsung isungula ilaphu layo lokucoca elikhethekileyo kubathengi befemu abayinxalenye yenkqubo ye-Samsung ...
I-Samsung ilandela emanyathelweni ka-Apple kwaye ngoku ivumela ukuhambisa ibha yedilesi yesikhangeli ukuya ezantsi
por UKarim Hmeidan yenzayo Inyanga e-1 .
Kwiinyanga ezimbalwa ngoku sine-iOS 15, inkqubo entsha yokusebenza yee-iDevices kwiveki ephelileyo ...
por UToni Cortés yenzayo Inyanga e-1 .
UMark Zuckerberg ujongeka ngathi ufuna ukuzama ithamsanqa lakhe kwihlabathi lezixhobo zombane. Akwanelanga ukuba ne...
Ngokwabafana kwiProtocol, umenzi wesithethi uSonos ufuna ukunciphisa ukhuphiswano oluhlala lukhula ...
I-Apple ayaziwa ngokuvula iinkqubo zayo kakhulu. Siyibonile xa kwasungulwa i-iPod, abaninzi bakhalaza ...
Ivenkile kaMicrosoft yongeza inkxaso kwezinye iivenkile ezikwi-app
IMicrosoft ibhengeze ukuba izakuvula iVenkile kaMicrosoft, ivenkile esemthethweni yeMicrosoft kwiWindows, kwizicelo ezivela ...
Kwiminyaka embalwa, iApple ayihlaziyanga inani lababhalisi abazizigidi ezingama-60 ababeneqonga layo ...